Miyey u fiicantahay nimanku inay sarajoog ku kaadshaan? - BBC 1593太阳集团城一切网址 Somali
Image caption Nimanka ree galbeedka badankooda waxa la baray inay istaag ku kaadshaan
Dhaqamo badan, caruurta waxa la baraa in wiilashu kaadshaan iyagoo taagan halka hablahana ay tahay in ay fadhiistaan.
Laakiin arrintan baahday- sida muuqatana iska qasabka noqotay- ayaa imika ay su'aal gelinayaan khubarada caafimaadka ee dhawr dal.
Kiisaska qaarkood, sababta la bixiyo in dib loo eego sida nimanku u kaadshaan waxay ku salaysantahay caafimaadka iyo fayo dhawrka laakiin kuwo kale waxay sidoo kale u tahay arrin xuquuq siman ah.
Haddaba yaa sax ah? waxaana intaa ka sii muhiimsan, maxaa nimanka u wanaagsan?
Sii deyn degdeg ah?
Nimanka badankooda, in istaaga lagu kaadshaa way u fududahay.
Sidoo kale waa degdeg: bal eeg kuyuuga suuliyada ragga ee dadweynaha. Waa run, leen dheer ma jiro. Nimanku way geliyaan uun oo markiiba ka soo baxayaan dhamaantood.
Sababta degdeggani uga jiro suuliyada waa laba qaybood;
1.Nimanku dhakhso ayay u kaadshaan sababtuna waa in aanay dhar badan iska bixinayn.
2.Maadaama qol keli ah lagu xidhi karo meelaha lagu kaadsho, laakiin meelo dhawr ah oo gaar ah ayaa soo jeedinaya in marka la kaadshayo sida loo istaagayaa ay saamayn karto xadiga kaadida ah ee soo baxaya.
Aynu eegno sida aynu u kaadino. Kaadideena waxaa soo saara kelyaha oo qashinka ka sifeeya dhiigeenna.
Ka dib waxa lagu kaydiyaa kaadi haysta oo awood inoo siisa in aan hawl maalmeedkeena iska wadano- iyo hurdada habeenkii- inaga oo aan wax walaaca ka qabin in aan suuliga tagno.
In kasta oo kaadi-haysta mugeedu u dhexeeyo 300ml iyo 600, waxaynu isku daynaa in aynu iska daadinyo marka ay saddex meeloodow laba buuxsanto.
Si gabigigiisaba loo faaruqiyo kaadi haysta, waxaynu u baahannahay neerfiyo caafimaad qaba oo xakameeya, kaas oo inoo sheega marka aynu u baahanahay suuliga oo xajin kara kaadida haddii aanaan halka iyo markaa ku sii dayn karin.
Marka ay aad inoo hayso, muruqyada kaadihaysta (oo ah muruqyo ku wereegsan dhuunta kaadi mareenta ee ka baxda kaadi haysta) ayaa dabca.
Kaadi haystuna way ururtaa markaasay kaadidu ka soo baxdaa oo intay soo marto kaadi mareenka jidhka ka baxdaa.
Istaag mise fadhi?
Qofka caafimaadka qabaa maaha inuu xoog kaadida iskaga soo saaro.
Laakiin mararka qaar ayaa nimanku waxay ka cawdaan xaalado keeni kara culays mudo gaaban ah ama joogto ah marka la kaadshayo.
Sida ay sheegtay daraasad lagu qoray wargeyska PlosOne, nimanka uu xanuunayo qanjirka oo xaniba kaadi mareenka, ayaa ka faa'iidaysan kara fadhiga markay kaadshayaan.
Bulukeeti ka samaysan kaadi bani'aadan
'Feyraska ka dhasha Hergebka oo lagu daweyn karo cudur halis ah'
Daraasadu waxay is barbar dhigtay nimanka caafimaadka qaba iyo kuwa qaba cudurka la yidhaa LUTS oo ah dheecaan xaniba kaadida oo sidoo kalena loo yaqaan Prostate Syndrome.
Waxay ogaatay in nimanka ka cabanaya LUTS, fadhigu ka fududeeyo cadaadisa saaran kaadi mareenka oo ay si fiican u kaadshi karaan oo dhakhso ah.
Laakiin nimanka caafimaadka qaba, natiijadu may tusin kala duwanaanshaha istaaga iyo fadhiga.
Go'aanka adiga kuu fiican....
Ingriiska, wakaaladda adeega caafimaadka (NHS) waxay ku talo bixisaa in nimanka dhibaatadu ka haystao kaadida ay eegtaan meel bilaa buuq ah oo ay fadhiistaan.
Waa laga yaabaa in aad mashaqay sheekooyin sheegaya in fadhiga oo lagu kaadshaa ay ka hor tagi karto kansarka Prostate-ka ama ay hagaajiso noloshada galmada ee ninka- laakiin ma jirto cadayn ama daraasad arintaa muujinaysaa.
... iyo qof kasta oo kale oo isticmaalayaa suuli isku mid ah
Waxaynu hadda ognahay waa in sheekooyinkaasi ay u muuqdaan in ay ka soo bilaabmeen 2012-ki dalka Sweden, mar siyaasi maxali ahi uu khaatiyaan ka istaagay xaalada suuliyada dadweynaha ee magaalada ee uu go'aansanday inuu hab hal abuura helo oo nimanka ka dhigaysa inay arrinta si kale u eegaan.
Wuxuu sheegay in waxa dhiiri geliyey uu ahaa inuu horumariyo fayo dhawrka iyo inuu xaqiijiyo in dadku aanay ka talaabsan waxyaabo laga shakiyo markay musqusha galayaan.
Doodu waxay qabsatay dhawr dal oo Yurub ah - gaar ahaan Jarmalka- waxa ka jira suuliyo dad weyne oo marka la galo in sarajooga lagu kaadshaa mamnuuc tahay.
Suuliyada qaarkood waxa ku taal calaamad cas oo mamnuucaysa in istaag lagu kaadsho - laakiin kuwa doorta in ay fadhiistaan ayaa badanaa lagu sheegaa "Sitzpinkler", kaas oo muujinaya in aanay ahayn dhaqanka nimanka.
Guryaha gaarka ayay saamaysay sidoo kale, halkaas oo mararka qaar calaamado suuliyada ku yaal dhiiri geliyaan raga martida ah in ay fadhistaan marka ay kaadshayaan.
2015 waxa Jarmalka ka dhacday dacwad maxkamadeed oo uu nin guri lahaa dalbanayey in kharashka khasaaraha gaadhay marmarka suuliga gurigiisa oo kaadidu dhaawacday mag laga siiiyo.
Laakiin kama dambaystii garsoorihii wuxu xukumay in habka ninku ahaa mid aan dhaafsanayn dhaqanka waxaanu sheegay in "sarajooga oo lagu kaadshaa weli dhaqan caadiya tahay".
Mozambique: Araday la waraabiyay kaadi
20 Abriil 2018
Dagaalyahanno Islaamiyiin ah oo lagu xidhay dalka Mozambique
25 Oktoobar 2018